Lammiwwan Amerikaa Gara Biyyoota Alaatti Imaluu Dura Maal Hubachuu Qabu?
Amajjii 12, 2018
Ministriin dantaa alaa yunaaytid Istetes, lammiwwan Amerikaa gara biyyoota alaatti ituu hin imaliin dura, of eeggannoo akka godhaniif biyyoota addunyaa irra jiran haala nagaa fi nageenyaa qaban irratti hunda'uun sadarkaa 4tti ramadusa Finfinnee kan jiru Embaasiin Amerikaa Ibsee jira.
Lammiwwan Amerikaa walitti bu’insa uumamuu malan kan ilaaleen dameewwan qunnamuu qaban akkasumas biyya ofiin ala yeroo deeman qunnamtiin jiru akka addaan hin cinne taasisuuf of-eeggannoo barbaachisu gochuuf kun qophaa’uu isaa ibsamee jira.
Haaluma kanaan ramaddii tokkoffaan of-eegganoo baratamee gochuu; ramaddii lammaffaan off egannoo dabalataa kan gaafatu; ramaddii sadaffaan bakka rakkoon nageenyaa olanaa qaban akkasumas imala sageeenteffatanii jiran keessa deebi’anii xiinxaluu; akkasumas ramaddii arfaffaan tasa gara sanittii deemuun hin barbaachiisnee jedhee ramadamee jira.
Itiyoophiyaan ramaddii lammaffaa keessa kan jirtu yoo ta’u achuuma Itiyoophiyaa keessatti bulchiinsii naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa fi bulchiinsa naannooAffaar, akkasumas naannoo Somaaleen sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa walduraa dubaan ramade.
Gabaasaa guutuu Nugusuutu dhiheessaa.